Jidku wuxuu Is Bedelayaa Mersin Metro | RayHaber
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinJidku wuxuu isku beddelayaa Mersin Metro
20 / 11 / 2019 33 Mersin, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
horumar muhiim ah oo laxiriira mashruuca metro-ka mersin
Jidku wuxuu Is Bedelayaa Mersin Metro; Duqa degmada Mersin ee Magaalo Weynta Vahap Se madeer wuxuu sameeyey hadalo muhiim ah oo ku saabsan mashruuca mitrooga kaasoo muhiimad weyn u leh Mersin munaasabada oo ay soo qaban qaabiyeen waaxda haweenka iyo caruurta ayna ku casuumeen mukhtars dhamaan gobolka. Metro ayaa beddeli doonta jidka, sidoo kale mashruuc yareyn doona qiimaha Madaxweynaha Expresser ayaa diyaarin doona mashruuc, Isbitaalka Magaalada ee loo yaqaan 'Metro Line City Hospital', saldhigga basaska cusub oo wuxuu ku fidi doonaa jaamacadda, ayuu yiri.
Gaadiidka Cisbitaalka Magaalada iyo Saldhigga Baska ee Metro
Duqa Degmooyinka Magaalada Mersin Vahap Seçer wuxuu sameeyey bayaan muhiim ah oo ku saabsan mashruuca mitrooga kaasoo xalka ugu weyn u keenaya dhibaatada gaadiidka ee Mersin kulanka ay la yeelanayaan haweenka mukhtars.
Mashaariicda Metro ee la diyaariyey xilliyadii hore, waxaa la qorsheeyay in la dhiso xariiq Metro oo u dhaxaysa Mezitli iyo Gar. Isbitaalka Magaalada, boosteejada baska cusub iyo Jaamacadda Mersin kama aysan qeyb qaadaneyn mashaariicdan. Duqa Vahap Seçer wuxuu cadeeyay inay diyaarin doonaan mashruuc cusub oo metro metelo ah oo ay kujirto bartaan 3 iyadoo tixgelinaysa rakaabka rakaabka wuxuuna yiri, “Metro waa hubaal. Waxaan sida ugu dhakhsaha badan u bilaabeynaa isbuuca soo socda. Isbitaalka Magaalada iyo khadka boosteejada baska laga soo qaado dusha sare ee dhulka hoostiisa, isgoyska tarabuunka wuxuu noqon doonaa taraamka Jaamacadda. Maaha khadka Mezitli-Gar ee ka sarreeya Gazi Mustafa Kemal Boulevard. Waxaan nidhi bal aan galno badda Mediterranean. Badda Mediterranean-ka sidoo kale waxay ka faa'iideysan doontaa Metro. Waxay ka bilaabmi doontaa boosteejadii hore ee baska waxayna sii marsiin doontaa Siteler, ilaa Isbitaalka Magaalada iyo halkaas ilaa iyo saldhigga cusub ee baska ”.
Saldhigga Isbitaalka ee Khaaska ah ee Sare Bursa
Gaadiidka Gaadiidka Isbedelaya Sida Baahida
BUDO Pier wuxuu badalayaa Mudanya
Isbeddelka Badbaadada Baska ee Isbaanishka
Jaale / Jaale ah Isku xidhka Magaalada, Jidka iyo Fudud ee Magaalada…
Bilaabidda ololaha YHT ee Ankara waa isbedel
Waqtiga dalxiiska ee East Express oo isbeddelaya
Magaca xarun ayaa isbeddeleysa Bursaray
Feejignaan! .. Gaadiidka saaran Mürselpaşa Boulevard…
Tirada Dhirta Ankara ee TCDD ayaa is badalaysa! ..
Mersin Metro Station
Mashruuca mitrooga Mersin
Xaaladda ugu dambeysay ee Mersin Metro
Khadka tareenka Mezitli